July Dream: Project FIVE
Posted by JulyDream at 11:40 PM
မောင်ဇူလိုင်က တရုတ်လူမျိုးဆိုတော့ တရုတ်မ
လေးကိုပဲ မလွဲမသွေယူရမှာပေါ့လေ.ဒါမှ အမျိုးကို စောင့်ထိန်းရာရောက်တာပေါ့နော်.း)
ဟုတ်ပါတယ် .လူဆိုတာ ဒီနေ့သေမလား၊မနက်
အတွင်းမှာတော့ ကိုယ့်ဘ၀ရှေ့ရေးအတွက် ကြို
ရောပေါ့.ကိုယ်ချပြထားတဲ့ စိတ်ကူးလေးတွေကို နောက်လူတွေ အကောင်အထည် ဖော်နိုင်သွားရင်လည်း
စိတ်ကူးယဉ်တာပဲ ပိုက်ဆံပေးရတာမှ မဟုတ်တာကိုနော်.း)
နောင် ၅နှစ်အတွင်း ဘလော့ဂ်စာမျက်နှာပေါ်
မှာ ကျွန်မနဲ့မောင် ခေါင်းစဉ်အစား “ကျွန်တော်နဲ့ မ” သို့ “ကျွန်တော်နဲ့သူမ”ခေါင်း
စဉ်လေးနဲ့ ပျော်ရွှင်စရာ ဇာတ်လမ်းလေးတစ်
ပုဒ် ဖတ်ခွင့်ရရင် ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ ဖတ်ချင်ပါသေး
ရေးပေးတာ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ထပ်ပြောသွားပါတယ် မောင်ငယ်ဇူလိုင်ရေ.
ရီလိုက်ရတာ လိုင်လိုင်ရယ်...ရေးလိုက်ရင်တော့ အတုံးလိုက် အတစ်လိုက်ပဲ စုံနေတာပဲ သူ့နောက်၅နှစ်ကလည်း .... အရူးချီးပန်း စိတ်ကူးယဉ်တာတွေ မြန်မြန်ပြည့်ပါစေ...ဟိ
နောင်ငါးနှစ် စီမံကိန်းကြီးကို လာဖတ်သွားတယ်ကွ...
မင်းက တရုတ်မလေးကို ယူမယ်ဆိုတော့ ငါနဲ့တူတာပေါ့ကွ မတူတာက ငါက ရခိုင်-ဗမာဖြစ်နေတာပါပဲ....
ချစ်သူလေး ရှိနေပြီးသား မဟုတ်ဘူးလား။ အိမ်ထောင်ပြုဖို့တော့ ဒီအသက်အရွယ်ဟာ မစောတော့ဘူးထင်တယ် နောက်ထပ် ငါးနှစ်အတွင်း မဟုတ်ဘူး တနှစ်အတွင်း လာမည့်နှစ်မှာတောင် တော်တော်လေး နောက်ကျနေပြီ။
မိဘနဲ့ သားသမီး အသက်သိပ်ကွာရင် သားသမီး အရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ အတွေးအခေါ်သိပ်ကွာတတ်တယ်။
၅ နှစ်စီမံကိန်းဆိုတာ နှစ်ရှည်ဖြစ်လွန်းပါတယ်။
ဘာမှ စဉ်းစားမနေနဲ့ ၊ ယူသာယူလိုက်ပါ ၊ အဖတ်တင်တာပေါ့။
မစဉ်းစားနဲ့ စဉ်းစားရင် ခေါင်းဖြူမယ်။ ဒီတော့ ယူသာယူလိုက် အဖတ်တင်တာပေါ့.. ဘာအဖတ်လဲဆိုတာ တော့ သိချင်ရင် ယူကြည့်လိုက်.. ဟိ
ဟုတ်သားပဲ.. ငါးနှစ်ဆိုတာက ကြာလွန်းပါတယ်.. ၂ နှစ်လောက်ဆို အကောင်အထည် ဖော်သင့်ပြီပေါ့..
ချစ်သူလေး အကြောင်းလည်း မပါတော့ပါလား.. စိတ်ကောက်နေသလား...
အဲဒါကြောင့် တရုတ်တွေကိုလေးစားတာ(အမျိုးထိန်းသိမ်းရေးကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လာရင်လေ) နေ့အိပ်မက်နဲ့သိသမျှတရုတ်တိုင်း အဲဒီ ၁၀၀ရာခိုင်နှုန်းတရုတ်ဖြစ်မှဆိုတဲ့ စကားကိုပြောတယ်... သိပ်အားကျတာပဲ အဟုတ်
ဖတ်ပြီးတော့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရေးရဲ့တဲ့ စိတ် မကွယ်မ၀ှက် ပြောသွားတဲ့ သတ္တိကို လေးစား လိုက်ပါတယ်.. အိမ်မက်တွေ အကောင်အထည် ပေါ်ပါစေ .. ချစ်စရာ ဖြူဖြူ ချောချောလေးနဲ့ တရုတ်တန်းက ၀က်သား ဒုတ်ထိုးဆိုင်မှာ အတူတွဲ ထိုင်နိုင်ပါစေနော်..
ဟေ့ လျှောက်မပြောနဲ့ ကိုယ့်အကြံ သူများဦးသွားမယ် တိုးတိုး ရှူး။
ရီလိုက်ရတာ ကိုဂျူလိုင်ရေ ရေးလည်း ရေးတတ်ပ ကွန်းမန့်တွေကလည်း ရီရသေးတယ် ဟိ
ကြိုက်တယ် ဒီပို့စ် စောစောက မတွေ့မိဘူး။ နောက်ကျမှ ဖတ်ရတယ်။
တခုတော့ ရှိတယ်။ တရုတ်လူမျိုး ၁ဝဝ% ဖြစ်ရမယ် ဆိုတာ... အဲဒါကိုလည်း ကြိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ (ဘိုးဘေးဘီဘင်ကနေ အဖေလက်ထက်အထိ တည်ဆောက်လာတဲ့ အမျိုးကို ကိုယ့်လက်ထက်မှာ ပျက်ရမယ်ဆိုရင် သောက်သုံးမကျရာ ဖြစ်လွန်းပါတယ်။) ဆိုတာ... မဆိုင်ပါဘူး။ စောင့်ထိန်းနိုင်ရင် ချီးကျူးရမှာပါ။ မစောင့်ထိန်းနိုင်ရင်လဲ အချစ်နဲ့ အိမ်ထောင်ရေး ဆိုတာ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမို့ ကိုယ်ကတော့ ဘယ်သူ့မဆို ခွင့်လွှတ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် သတင်းစာတွေထဲမှာ DASSK ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကို စောင်းမြောင်းရေးတာတွေတွေ့ရင် အူကြောင်ကြား အရေးအသားတွေလို့ အမြဲ ခံစားမိတယ်။ ဒါဟာ သူ့ကို စိတ်ဝင်စားတာ မစားတာနဲ့ မဆိုင်ဘူး။ လူ့ အခွင့်အရေးကို စိတ်ဝင်စားတာပါ။
ဒီလိုပဲ စစ်တပ်က လူနဲ့ ယူလို့ ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ် လို့ ဒီဘက် အုပ်စုကပြောရင်လည်း အဲဒါ ဟိုဘက်အုပ်စုနဲ့ တလေတည်းထွက်တဲ့ အကျင့်စရိုက်တူတွေလို့ ကိုယ်က သတ်မှတ်တယ်။
ဘာဖြစ်လို့ ဆိုတော့... အချစ်နဲ့ အိမ်ထောင်ရေးဟာ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ဖြစ်လို့ပါပဲ။ သူနဲ့ ကိုယ် ကျေနပ်ရင် ပြီးပါတယ်။ နောက်မှ သူ့ဆွေမျိုး ကိုယ့်ဆွေမျိုး လာမှာပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စနဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ ခံယူချက် ဆက်နွယ်မှု မရှိလှပါ ဆိုတာ တခြားသူတွေ သိသွားအောင် ပြောပြလိုက်ပါရစေ။ ကျွန်တော်ဆိုလိုရင်းက အဲဒီလိုသာ ကျွန်တော် မထိန်းနိုင်ရင် ကျွန်တော် သောက်သုံးမကျရာ ရောက်နေမယ်ဆိုတာကို ပြောတာပါ။
သူများတကာရဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်ကို ကျွန်တော် မကာဆီးပါဘူး။ ကာဆီးခွင့်လည်း မရှိကြောင်း ကျွန်တော် သိနားလည်ထားပါတယ်။
ကျွန်တော်ဟာ ဘယ်သူမှ မစေခိုင်းပဲနဲ့ ကျွန်တော့်ဘောင်ထဲမှာ စည်းအထပ်ထပ် တားပြီး ကိုယ့်ဘာသာ အကျဉ်းချထားတဲ့ လူတစ်ယောက်ပါ။
Smart guy အချင်းချင်း ခြေမြင် အိုခေပေမယ့် မအိုခေမယ့်အရာတွေ ရှိလာမှာကို ကြိုမြင်လို့ ရာမက သီတာကို စည်းတားတယ်လို့ပဲ မြင်လိုက်ပါဗျာ။
ဟုတ်ပါပြီ DASSK ရဲ့ ကိစ္စက သတိရမိလို့ ကိုယ့်ဘာသာ ဆွဲပြောလိုက်တာပါ။ ကိုယ်က အဲလိုပဲ ဆက်စပ်ဆွဲယူတတ်တယ်။
မနေ့ကတည်းက ဖတ်ပြီး သဘောကျနေတာ။။
အဟောသုခံ ကောင်းလေစွ။ ဒီရက်ပိုင်း မိန်းမယူဖို့ စိုင်းပြင်းနေသူ တွေ တယ်များပါလားးး့း (မမကွန် ဆက်စဉ်းစားရန်)
ဟာ...... ငါပါ ဝင်စဉ်းစားနေမိပါလား
တရုတ်လူမျိုး မို့လို့ တရုတ်မပဲ လိုချင်တယ် ဆိုတာကိုကြိုက်တယ်။ ဒီစလုံးမှာ တခါတလေ ပြည်ကြီးက တရုတ်မ ဖြူဖြူဖွေးဖွေး နဲ့ ကုလားမဲမဲနဲ့ တွဲတာ တခါတလေ လမ်းမှာတွေ့ ရင်မျက်စိထဲမှာ ကြည့်ရတာ အဆင်ကို မပြေဘူး။ တရုတ်ပြည်မှာ ယောကျာ်းလေးဒီလောက် ပေါတာကို။ ဒါပေမဲ့လဲ ဒါသူတို့လွတ်လပ်ခွင့်ဘဲလေဆိုပြီးတော့....။။.
အိမ်မှာ ပါပါးမာမားကလဲ ဘယ်နိုင်ငံသား ဖြစ်ဖြစ် ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ တရုတ်လူမျိုးဖြစ်ရမယ်တဲ့။ ရုံးမှာ မေးကြည့်မိသလောက် အင်ဒိုက တရုတ်ကော၊ မလေးရှားက တရုတ်ကော အဲဒီလိုဘဲတဲ့။ အော်... လူမျိုးချစ်ကြတယ်။